Gantaalihii Iiraan cidi kuma dhiman maxayse ahayd fariinta guud: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gantaalihii Iiraan cidi kuma dhiman maxayse ahayd fariinta guud: SAWIRO
Iiraan oo ku lumisay dhimashada hogaamiye Qaasim Suleymaan oo Maraykanku diley in ka badan 50 qof ayaa shalay gantaalo ku garaacdey saldhiga weyn ee Maraykanku ku leeyahay Ciraaq iyo weliba qunsuliyada ku taal magaalada Eerbiil ee Woqooyiga ee Ciraaq.
Labada meeloodba cidi kuma dhiman waxaanad is weydiin kartaa sababta keentay. Xagjir Taram ayaa shalay sheegay in qalabkiisa sheega jugta gantaalaha uu siiyay fursad ay ku dhuuntaan laakiin taasi waa been, waxana runta sheegtay Iiraan iyo Ciraaq.
Iiraan ayaa sheegtay in laba saacadood kahor ay Ciraaq u sheegtay in gantaalo Ku soo socdaan labadaa goobood, kadibna Ciraaq u gudbisay fariintaas ciidanka Maraykanka oo jooga labadaa goobood.
Kadib waxa dhacay ayaa haddaba Ku reebay naxdin iyo lama filaan xagjir Taram iyo ciidankiisa. Iiraan waxay si kama leexdaana gantaalahoodii u garaaceen una burburiyeen 3 bakhaar oo ku yaalay saldhiga.
Halka qunsuliyada ay ka leexiyeen gantaalaha kuna dhufteen meel aan ma fogeyn. Tani waxay muujinaysaa awooda Iiraan ayadoo sanado badan tijaabisay gantaalada kala duwan ee haysato, ayna muujisayna awooda ay u lahayd inay gaysato khasaare laxaadle.
Waxa awoodaa qirtey xagjir Taram iyo dhamaan reer galbeedka oo awal oran jirey Iiraan waxay haysataa gantaalihii Ruushka ee aan hagida lahayn.
Iiraan waxay ka leexatey inay disho ciidanka Maraykanka ee joogey goobahaas ayadoo dili karta ayuu qirtey Jeneraal Mask oo ka tirsan ciidanka Maraykanka.
“Anaa kuu sheegaya waxaan hadda aragney ee aan ogyahay, waxaan shaki ku jirin in goobahaas iyo qunsuliyadaba aan aqal jooga sarajooga lagu arkeen haddii Iiraan rabto ayuu raaciyay.
Iiraan waxay ka fikirtey mustaqbalka waxayna dirtey fariinta hadda aan laga been sheegayn, waxana hadda ku daayay hanjabaad dambe oo la is weydaarsado.
Sawirada hoose waa burburka meelaha gantaaluhu sida saxda ah ugu dhaceen.